China high quality Isilinda intloko mveliso kunye nabathengisi USAMUWELI
imodeli: Isilinda sePiston
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: Ford FOCUS-DV6 2.2
Ukufuduswa kwemoto: 2.2L
I-OEN: 908867/1433147/9662378080/71724181 / 0200GW
Inani iisilinda: 16
Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, iseti yejeneretha, umgangatho wokuqala, ngenkangeleko entle, uxinizelelo oluphezulu, ukutyibilika, ukukhanya kunye nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
Iimeko zokusebenza kunye neemfuno zentloko yesilinda
Intloko yesilinda ithwala umthwalo woomatshini obangelwe kukunyanzelwa kwegesi kunye nokuqiniswa kweebhloko zeesilinda zentloko, kwaye kwangaxeshanye, ibonakaliswe kwimithwalo ephezulu yokufudumeza ngenxa yokunxibelelana negesi enobushushu obuphezulu. Ukuqinisekisa ukutywina okuhle kwesilinda, intloko yesilinda ayinakonakala okanye ikhubazeke. Ukulungiselela le njongo, intloko yesilinda kufuneka ibe namandla aneleyo kunye nokuqina. Ukuze usasaze ubushushu bentloko yesilinda njengeyunifom kangangoko kunokwenzeka kwaye kuthintele iintanda ezishushu phakathi kwendawo yokutya neyokukhupha ivelufa, intloko yesilinda kufuneka ipholile kakuhle.
Umgangatho ophezulu wentloko yesilinda yemoto:
imodeli Isilinda sePiston
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo IFord FOCUS-DV6 2.2
Inani leesilinda 16
Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo.
Egqithileyo Umqhubi okhokelayo wePiston Crankshaft-Injini yokuphosa i-Crankshaft yePerkins135 ene-Oem Inani 31312730 ngexabiso lefektri -SAMUEL
Okulandelayo: Isiphelo seCamshaft
INtloko yeSilinda yeMoto
Intloko yeFord Cylinder
INtloko yeSilinda yeGmw
INtloko yeSilinda yeHyundai
Intloko yeJac Cylinder